တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ မင်းကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်… - Tameelay
တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ မင်းကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်…
တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ မင်းကို မွေးဖွားခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက် လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားပြီဆိုရင်….
ဒီလောကမှာ မင်းနဲ့ သွေးချင်းအရင်းနှီးဆုံး လူနှစ်ယောက် မရှိတော့ဘူးလို့ နားလည်ပါ….
ဒါကြောင့် မိဘတွေရှိတုန်းမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါ…မိဘတွေကို မင်းအတွက် စိတ်မပူပါစေနဲ့…
မိဘတွေ လိုချင်တာက သားသမီးတွေဆီက ပိုက်ဆံတွေထက် သားသမီးတွေရဲ့ အဖော်ပြုပေးမှုပါပဲ…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သားသမီးတွေဆိုတာ မိဘတွေရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ….
ဒီလောကမှာ မင်းကို စိတ်ရင်းစေတနာ နွေးထွေးတဲ့ အကြင်နာနဲ့ ယုယစွာချစ်မဲ့သူနှစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ နားလည်ပါ….
ဘယ်မိဘကမှ သူတို့ရဲ့ အုတ်ဂူရှေ့မှာ သားသမီးတွေပူဆွေးနေတာကို ကြည့်ရက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး….
ဒါကြောင့် အချိန်ရပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်ကိုပြန်ပြီး မိဘတွေနဲ့ တွေ့ပါ….ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် ပျော်ပွဲစားရုံတွေမှာ အချိန်ကုန်နေမဲ့အစား မိဘရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ပျော်ရွှင်ပါ….
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးတွေ ပြန်လာမှာကို မျှော်လင့်နေတတ်လို့ပါပဲ….
ဒီလောကမှာ မင်း ထမင်းမစားချင်တဲ့အခါ.. ဂရုတစိုက် ကျွေးမွေးမဲ့သူနှစ်ယောက် မရှိတော့ဘူးလို့ နားလည်ပါ….
ဒါကြောင့် အပြင်မှာ ဘယ်လောက် အလုပ်များများ…အိမ်ပြန်ပြီး မိဘတွေနဲ့ အတူတူ ထမင်းလက်ဆုံစားပါ…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတွေမရှိတော့မှ သူတို့နဲ့အတူတူ ထမင်းစားချင်လို့ မရနိုင်တော့လို့ပါပဲ….
ဒီလောကမှာ…မင်းကို နေကောင်းရဲ့လား …အလုပ်အဆင်ပြေရဲ့လား…ပိန်သွားလား..၀ နေလား..ဆိုပြီး ဂရုစိုက်မဲ့သူနှစ်ယောက် မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ နားလည်ပါ….
တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ကို ဂရုစိုက်ရတယ်ဆိုတာ အပင်ပန်းဆုံးပါပဲ…တော်ရုံလူက မင်းကို အမြဲ ဂရုစိုက်နေဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး…
ဒါကြောင့် မိဘတွေ နေမကောင်းတဲ့အခါ…သူတို့ကို အထူး ဂရုစိုက်ပါ…အဝေးရောက်နေခဲ့ရင်လဲ မိဘတွေနဲ့ အမြဲဖုန်းဆက်သွယ်ပါ…ကိုယ့်ရဲ့ အခြေအနေကို ပြောပြသလို မိဘတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုလဲ အလေးထားပါ…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ နာမကျန်းတဲ့အခါ…အတမ်းတဆုံးက မင်းဆီက မေတ္တာဖြစ်နေလို့ပါပဲ…
ဒီလောကမှာ မင်းကို အဆုံးအစမရှိ မေတ္တာအနန္တနဲ့ ချစ်နိုင်မဲ့ သူနှစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ နားလည်ပါ….
ဒါကြောင့် မိဘတွေကို စိတ်မထိခိုက်ပါစေနဲ့…မိဘတွေရှိတုန်းမှာ ပျော်ရွှင်မှုများများပေးပါ….
မင်းမှာ အချိန်မရှိဘူးလို့စောဒက မတက်ပါနဲ့…အလုပ်အရမ်းများတယ်လို့ မညည်းတွားပါနဲ့….ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကို တခြားသူတွေဆီမှာ အချည်းနှီး အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့…
မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ သင့်တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပေးပါ….
သူငယ်ချင်းဆုံးရှုံးသွားရင် ပြန်ရှာလို့ရတယ်…အလုပ်မရှိတော့ရင်…အလုပ်အသစ်ရှာလို့ရတယ်…ယုတ်စွအဆုံး နှလုံးသားတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားရင် ပြန်အစားထိုးလို့ရပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ မိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်အရာနဲ့ မှ အစားထိုးလို့ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး…
Credit to မိဘကျေးဇူး မြင့်မိုရ်ဦး
Post by #AChitThitSar
တကယျလို့ တဈနနေ့မှေ့ာ မငျးကို မှေးဖှားခဲ့တဲ့ လူနှဈယောကျ လောကကွီးထဲက ထှကျခှာသှားပွီဆိုရငျ….
ဒီလောကမှာ မငျးနဲ့ သှေးခငျြးအရငျးနှီးဆုံး လူနှဈယောကျ မရှိတော့ဘူးလို့ နားလညျပါ….
ဒါကွောငျ့ မိဘတှရှေိတုနျးမှာ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျဆကျဆံပါ…မိဘတှကေို မငျးအတှကျ စိတျမပူပါစနေဲ့…
မိဘတှေ လိုခငျြတာက သားသမီးတှဆေီက ပိုကျဆံတှထေကျ သားသမီးတှရေဲ့ အဖျောပွုပေးမှုပါပဲ…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သားသမီးတှဆေိုတာ မိဘတှရေဲ့ နှလုံးသညျးပှတျဖွဈနလေို့ပါပဲ….
ဒီလောကမှာ မငျးကို စိတျရငျးစတေနာ နှေးထှေးတဲ့ အကွငျနာနဲ့ ယုယစှာခဈြမဲ့သူနှဈယောကျ ဆုံးရှုံးသှားပွီလို့ နားလညျပါ….
ဘယျမိဘကမှ သူတို့ရဲ့ အုတျဂူရှမှေ့ာ သားသမီးတှပေူဆှေးနတောကို ကွညျ့ရကျမှာ မဟုတျပါဘူး….
ဒါကွောငျ့ အခြိနျရပွီဆိုတာနဲ့ အိမျကိုပွနျပွီး မိဘတှနေဲ့ တှပေ့ါ….ကိုယျ့အိမျမဟုတျတဲ့ စားသောကျဆိုငျ ပြျောပှဲစားရုံတှမှော အခြိနျကုနျနမေဲ့အစား မိဘရဲ့ ရငျခှငျမှာ ပြျောရှငျပါ….
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတှဆေိုတာ သားသမီးတှေ ပွနျလာမှာကို မြှျောလငျ့နတေတျလို့ပါပဲ….
ဒီလောကမှာ မငျး ထမငျးမစားခငျြတဲ့အခါ.. ဂရုတစိုကျ ကြှေးမှေးမဲ့သူနှဈယောကျ မရှိတော့ဘူးလို့ နားလညျပါ….
ဒါကွောငျ့ အပွငျမှာ ဘယျလောကျ အလုပျမြားမြား…အိမျပွနျပွီး မိဘတှနေဲ့ အတူတူ ထမငျးလကျဆုံစားပါ…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတှမေရှိတော့မှ သူတို့နဲ့အတူတူ ထမငျးစားခငျြလို့ မရနိုငျတော့လို့ပါပဲ….
ဒီလောကမှာ…မငျးကို နကေောငျးရဲ့လား …အလုပျအဆငျပွရေဲ့လား…ပိနျသှားလား..၀ နလေား..ဆိုပွီး ဂရုစိုကျမဲ့သူနှဈယောကျ မရှိနိုငျတော့ဘူးလို့ နားလညျပါ….
တကယျတော့ လူတဈယောကျကို ဂရုစိုကျရတယျဆိုတာ အပငျပနျးဆုံးပါပဲ…တျောရုံလူက မငျးကို အမွဲ ဂရုစိုကျနဖေို့ဆိုတာ မလှယျပါဘူး…
ဒါကွောငျ့ မိဘတှေ နမေကောငျးတဲ့အခါ…သူတို့ကို အထူး ဂရုစိုကျပါ…အဝေးရောကျနခေဲ့ရငျလဲ မိဘတှနေဲ့ အမွဲဖုနျးဆကျသှယျပါ…ကိုယျ့ရဲ့ အခွအေနကေို ပွောပွသလို မိဘတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးကိုလဲ အလေးထားပါ…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ နာမကနျြးတဲ့အခါ…အတမျးတဆုံးက မငျးဆီက မတ်ေတာဖွဈနလေို့ပါပဲ…
ဒီလောကမှာ မငျးကို အဆုံးအစမရှိ မတ်ေတာအနန်တနဲ့ ခဈြနိုငျမဲ့ သူနှဈယောကျ ဆုံးရှုံးသှားပွီလို့ နားလညျပါ….
ဒါကွောငျ့ မိဘတှကေို စိတျမထိခိုကျပါစနေဲ့…မိဘတှရှေိတုနျးမှာ ပြျောရှငျမှုမြားမြားပေးပါ….
မငျးမှာ အခြိနျမရှိဘူးလို့စောဒက မတကျပါနဲ့…အလုပျအရမျးမြားတယျလို့ မညညျးတှားပါနဲ့….ကိုယျ့ရဲ့ အခြိနျတှကေို တခွားသူတှဆေီမှာ အခညျြးနှီး အခြိနျမကုနျပါစနေဲ့…
မိဘတှရေဲ့ ရငျထဲမှာ သငျ့တဈယောကျပဲ ရှိတယျဆိုတာ မှတျထားပေးပါ….
သူငယျခငျြးဆုံးရှုံးသှားရငျ ပွနျရှာလို့ရတယျ…အလုပျမရှိတော့ရငျ…အလုပျအသဈရှာလို့ရတယျ…ယုတျစှအဆုံး နှလုံးသားတဈခုဆုံးရှုံးသှားရငျ ပွနျအစားထိုးလို့ရပါတယျ…
ဒါပမေဲ့ မိဘတှမေရှိတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ဘယျအရာနဲ့ မှ အစားထိုးလို့ရမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး…
Credit to မိဘကြေးဇူး မွငျ့မိုရျဦး
၁။ ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက် ပျောက်ဆုံးခြင်း ဘဝမှာ ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိဘဲ၊ စိတ်လေလွင့်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေတိုင်းဟာ သင့်ထံက ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ဆိတ်သုဉ်းသွားစေပါတယ်။ အနာဂတ်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ရင်းနဲ့ပဲ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုတွေလည်း ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ၂။ တစ်ဖက်သား ပျော်ရွှင်မှုအတွက် ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို စတေးပစ်ခြင်း တစ်ချို့သူတွေက တစ်ခြားတစ်ဖက်သာပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုထက် ပိုအလေးပေးတတ်ကြပါတယ်။ …
မိန်းမတစ်ယောက်၏ အရည်အသွေး (မိန်းကလေးတိုင်းဖတ်ရန်)
အရည်​အ​သွေး ထက်​မြတ်​တဲ့အမျိုးသမီးက ( ဘယ်​​တော့မှအမှားရှိမှာကိုမ​ကြောက်​ဘူး။ ဘာ​ကြောင့်​ဆို သူမကကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယုံကြည်​မူရှိတယ်​​လေ။ ကိုယ်​ကျင့်​တရား​ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးက ဘယ်​​တော့မှကိ်ုယ့်​ရဲ့တန်​ဖိုးကို ကျဆင်း​အောင်​မလုပ်​ဘူး။ ဘာ​ကြောင့်​ဆို သူမကကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုအ​လေးထားတယ်​​လေ။ စိတ်​နှလုံးနူးညံသိမ်​​မွေ့တဲ့အမျိုးသမီးက ဘယ်​​တော့မှသူတစ်​ပါးထိခိုက်​နစ်​နာ​အောင်​မလုပ်​ဘူး။ ဘာ​ကြောင့်​ဆို သူမကဝဠ်​​ကြွေးသံသရာကို​ကြောက်​တယ်​​လေ။ အရည်​အချင်းရှိတဲ့ အမျိုးသမီးက ဘယ်​​တော့မှဆင်းရဲမှာကိုမ​ကြောက်​ဘူး။ ဘာ​ကြောင့်​ဆို သူမကကိုယ့်​ ကိုယ်​ရည်​​ကိုယ်​​သွေးကို ယုံကြည်​တယ်​​လေ။ သိပ်​​တော်​တဲ့အမျိုးသမီးက ဘယ်​​တော့မှသူတစ်​ပါးကိုမမှီခိုဘူး။ ဘာ​ကြောင့်​ဆို …
၁ ရက်ကို ၁ နာရီလောက်ပဲ ဒီအချက်တွေကိုလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးပါ.. မင်းဘဝပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်
၁ ရက်ကို ၁ နာရီလောက် ဒီအချက်တွေကိုလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ.. မင်းဘဝပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ် အလုပ်ပြီးချိန် ညခင်းတွေမှာ မင်းဘာလုပ်လဲဆိုတာက မင်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက် ဒါတွေလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ မင်းဘဝပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့ အလုပ်ချိန် ညနေ6နာရီမှာ ပြီးပြီးတော့ မင်းက …